Latest news about Federal Capital Territory from Nigeria & world | TODAY.NG
Jim Comey: Vladimir Putin boro isi na Donald Pump banyere Russia 'mara mma ...
Ahụmahụ Kenneth Omeruo dị mkpa nye Eagles na World Cup - NFF ...
Izu ohi: E jideghị Senator Omo-Agege - Ndị uweojii
N'adịghị ka akụkọ e jidere Senator Ovie Omo-Agege mgbe o kwusịrị na ọ na-eduga n'ime ụlọ ndị Senate iji dọpụta nwanyị ahụ, nchọpụta na-egosi na ndị uweojii na-esite na Nnọkọ Mgbakọ nanị si na ndị uweojii.
Ya ịbụisi Justice Binta Nyako na Federal High Court nọ ọdụ Federal Capital Territory ikpeazụ Friday, nyere ihe na-akụzi ihe, ịrịbama ikpe na okwu ahụ n'etiti Mohammed Bello Adoke na Attorney General nke Federation na n'ókè nke Presidential ike.
Ndi ochichi choro ka ndi uweojii na-achoputa ndi isi uwe ojii na Abuja
Ndi otu ndi ochichi nke ndi mmadu (PDP), na Monday choro ka ha juo ugbua n'agbata ndi agha na ndi otu ndi Shiite, na Federal Capital Territory (FCT) Abuja.
Foto: #BringBackOurGirls kwere nkwa ịnọgide na-eme mkpesa na Unity
Ndi otu n'ime umuaka anyi biaghachiri (BBOG) agbawo nkwa na ha ga-aga n'ihu na-ekpochapu ubochi ha na Unity Fountain na Abuja.
Ndị uweojii na-agbagha otu ìgwè ndị agha na ndị isi na Abia dike na Kastina United egwuregwu na ...
Ndị uweojii na Sunday gbaghaara otu ndị agha mwakpo megide ndị isi egwuregwu na Oge Ngwá Ọrụ 17 nke Njikọ Njikọ Ndị Ọrụ Nkà na Nigeria n'etiti Abia Warriors na nleta Katsina United FC na Umuahia Township Stadium.
Òtù na-enye $ 40 nde ọgwụ na-enye Nigeria
MedShare, nzukọ nke na-abaghị uru na United States, kwuru na o nyela ihe karịrị nde $ 40 maka ọgwụgwọ ọhụrụ na ihe ndị dị ndụ iji mee ka usoro nlekọta ahụike nke Nigeria dị na 20 afọ ikpeazụ.
Sheik El-Zakzaky: Otu ndị Shiha na-ewepu okporo ámá Abuja
Ndi otu ndi Shi'a, na Saturday, weghaara n'okporo ámá nke Abuja ka ha choo ka a hapuru onye ndu ha, bu Sheik Ibrahim El-Zakzaky, ebe a na-edebe ya na mkpochi kemgbe 2015.
Ndị uweojii na-ekesa ndị na-emegide ndị Shiite, jide onye ọrụ aka
Ulo oru nke onu ogugu ndi uweojii na Federal Federal, on Friday, bu ndi isi ala Islam na Naijiria na-eme mkpesa nke onye ndu ha, Ibrahim El-Zakyzaky.
Ụlọ ọrụ TCN 60MVAR akụ na-emepe iji melite eletrik eletrik na FCT
Ụlọ ọrụ Transmission nke Naijiria (TCN), nyere 60MVAR Capacitor Bank aka na Mgbakwunye Apo 132 / 33Kv iji melite mma na ọkụ eletrik nke ndị na-ere ahịa na Federal Capital Territory (FCT).
FRSC: 456 nwụrụ, 3,404 merụrụ ahụ na mberede okporo ụzọ na January
Otu onye na-ahụ maka nchekwa nchekwa okporo ụzọ (FRSC) kwuru na ndị 456 nwụrụ na 3404 ndị ọzọ merụrụ ahụ n'ihe mberede 826 e dekọrọ na mba na January.
Onye oru ugbo: Ugbo ohia na-enye m N200,000 kwa ọnwa
Eunice Akponimisingha, onye na-arụ ọrụ ụlọ, na-ekwu na ọ na-enweta ihe karịrị N200,000 kwa ọnwa site na oru ugbo, mgbe ọ na-anọ n'ụlọ iji rụọ ọrụ.
123...27Page 1 nke 27
Onye isi na-ahụ maka ndị isi oche, DG, nke Nigeria Television Authority, NTA, Mr. Vincent Maduka, ekwupụtawo na ọgụ gọọmentị gọọmentị gọọmentị na-eme mgbalị siri ike.
Onyeàmà: Maryam Sanda nwere egwu na ọ ga-egbu oge di ya
Onye ikpe mbụ na-agba akaebe na ikpe nke Maryam Sanda maka ebubo e gburu di ya, Bilyamin Bello ụnya nyere akaebe n'ụlọ ikpe.
Jupp Heynckes: Niko Kovac 'na-azụ' iji na-azụ Bayern Munich
Jupp Heynckes kwenyere na onye isi nchịkwa Bayern Munich, Niko Kovac, "choro" iji na-elekọta ya.
Balarabe Musa: Nwanyị Senate weghaara saga ihere, dị ize ndụ
Onye bubu gọvanọ nke ala Kaduna State, Balarabe Musa, ekwuola na a nabatara ndị inyom na Senate site na ndị hoodlums a na-enyo enyo dị ka ihere.
Kwụsị ịkwalite ụtụ ọchị na abụ gị - Ndị uweojii na-agwa ndị egwu
Onye na-ekwuchitere ndị uweojii na Lagos State, Chike Oti, ekwuola na ndị na-egwu egwú Nigeria kwesịrị ịkwụsị ịkwalite agụmakwụkwọ na abụ ha.
Harry Kane nwere ike izute Real Madrid - Mauricio Pochettino
Everton, AC Milan na-achọ ka nkwonkwo Europa Njikọ
NCCE nyochaa ụkpụrụ kachasị elu nke NCE iji melite ogo ndị nkụzi
Ọtụtụ puku na-eje ije na Barcelona maka ndị mkpọrọ Catalan
DMO na-etinye ego N400 iji nweta akụ na ụba - Obi Oniha
Gọvanọ Bello na-agbaghara ndị ọrụ ọrụ nchịkọta Kogi ADP